Kulamo aan loo kala kicin haddana kala gooni gooni ah ayaa illaa galabta ka soconaya xarunta Villa Soomaaliya | Xisbiga Xuriyada (The People Of Freedom)
Kulamo aan loo kala kicin haddana kala gooni gooni ah ayaa illaa galabta ka soconaya xarunta Villa Soomaaliya
Muqdisho Tuesday, April 10th, 2012 (MMG) – Kulamo aan loo kala kicin haddana kala gooni gooni ah ayaa illaa galabta ka soconaya xarunta Villa Soomaaliya gaar ahaan xafiisyada madaxweyne Shariif iyo kan raysul wasaare C/weli Gaas kuwaasi oo looga arinsanayo xaalada wasiirka warfaafinta DKMG C/qaadir Xuseen Jaahweyn oo ay arintiisu si weyn u gilgishay dawlada oo idil.
Kulamada waxay bilowdeen maanta markale ka dib markii la isku afgaran waayey kulan albaabadu xirnaayeen oo xalay ay yeesheen madaxweyne Shariif iyo raysul wasaare C/weli Gaas. Madaxweynuhu wuxuu aad u rabay in raysul wasaaruhu aqbalo xilka ceyrin lagu sameeyo wasiirka warfaafinta oo uu ku eedeynayo arintii ka dhacday Golaha Murtida iyo Madadaalada Arbacadii la soo dhaafay taasoo illaa 10 ruux ay ku dhinteen afartameeyo kalana dhaawacyo u yihiin laakiin raysul wasaare Gaas arintaasi wuu ka gows adeygay isagoo ku adkeystay in laga warsugo baaris lagu wado dhacdadaasi si loo ogaado cida masuuliyada qaadaneysa.
Kulamada maanta ka dhacay Villa Soomaaliya oo Raxanreeb kala sheekeysatay xubno ka agdhowaa ayaa u kala qeybsanaa mid dhex maray madaxweynaha iyo odayaasha beesha uu ka dhashay wasiirka warfaafinta. Iyo kulamo gaar ah oo ay gooni gooni u kala yeesheen xulufada raysulwasaaraha iyo xulufada madaxweynaha oo qolo kasta gaarkeed uga tashaneyso sida ay u wajaheyso murugta siyaasadeed ee hortaalla.
Jaahweyn oo laga ergeeyey
Odayaasha beesha uu ka dhashay wasiirka warfaafinta waxay markii ay u tageen madaxweynaha u cadeeyeen in wasiirkooda laga khaldan yahay ayna tahay in dawladu baaris ku sameyso dhacdadii qaraxa ee Tiyaatarka. Waxaa nagu maqaal ah in madaxweynuhu ku cawday in wasiirka ay ahayd inuu qirto khaladkii horseeday qaraxii Tiyaatarka ee Arbacadii 04/04/2012 iyo in wasaarada uu madaxda ka yahay wasiir Jaahweyn uusan la dhacsaneyn sida ay u shaqeyso, wuxuuna kulanka soo dhamaaday iyadoon wax natiijo ah la gaarin.
Waxaa kulankaasi ka dambeeyey wasiirka maaliyada DKMG Dr C/naasir Xaaji oo ka socday raysul wasaaraha ayaa madaxweynaha ugu tagay xafiiskiisa kaasoo isaguna isku dayey inuu arinta dhexgalo inkastoo aan la heyn faahfaahin buuxda oo kulankan la xiriirta.
Intii ay maanta kulamadan socdeen waxaa dibadbax dadweyne kooban ka qeybgaleen uu ka dhacay xaafada Xararyaale ee degmada Wardhiigley kaasoo dadkii ka soo qeybgalay oo u badnaa haween ay ku dhawaaqayeen ereyo lagu taageerayo wasiirka warfaafinta loogana horjeedo xilka qaadista la sheegay in wasiirka lagu sameynayo.
Xafiiska wasiirka warfaafinta ayaan maanta albaabada loo furin iyadoo saaka mar ay xafiiska tageen ciidamada nabadsugida oo markii dambe iskaga tagay.
Doodo iska horjeeda
Madaxweyne Shariif Axmed
Inkastoo baaritaan xoogan uu ku socdo kiiska qaraxii Tiyaatarka ee wasiirada iyo madaxweynaha iska horkeenay haddana waxaa saaxafadda soo gaaraya qodobo hordhac ah oo ay labada dhinac (Xulufada madaxweynaha iyo tan raysul wasaaraha) kala wataan. Madaxweyne Shariif, wasiirka gudaha iyo saraakiisha amniga oo isku aragti ah waxay ku doodayaan in hay’adaha amaanka aan lagu wargelin xafladii Tiyaatarka oo ahayd sanadguuradii telefishanka qaranka iyo in wasaarada warfaafintu aysan wax taxadar ah ka yeelan dadkii tirada badnaa ee ay casumaada u dirtay.
Laakiin wasiirka warfaafinta iyo taageerayaasha raysul wasaaraha waxay qabaan in amaanka aysan ku shaqo ku lahayn, iyagoo ku dooday in ay casumeen madaxdii ugu sareysay amaanka sida madaxweynaha oo ah taliyaha ciidanka qalabka sida. Waxay kaloo su’aal ka keeneen sababta madaxda hay’adaha amaanka u iman waayeen maalintaasi iyagoo la casumay.
Arimahan oo dhan weli jawaab looma hayo, guddiga baarista wadana weli waxay ku mashquulsan yihiin ururinta xogta la xiriirta sheekada Tiyaatarka ee la isku hayo walow aysan cadeyn cida ay garta siin doonaan.
Jaahweyn iyo Aragtida raysul wasaaraha
Eng C/qaadir Xuseen Maxamed Jaahweyn, waa nin mudo dheer deganaa dalka Ingiriiska waxna ku bartay ka hor intii uusan dalka ku soo laaban sanadkii 2010 xilligaasi oo uu Muqdisho ka hirgaliyey idaacad uu gaar u leeyahay. Galaangalkiisa siyaasada iyo firfircoonidiisa arimaha maamulka ayaa keenay in wasiirkii ka horeeyey C/kariin Xasan Jaamac u magacaabo agaasime qeybeed ka tirsan wasaaradda Warfaafinta isagoo markii dambana noqday wasiirka warfaafinta ee xukuumadda C/weli Gaas ee hadda jirta.
Shakhsi ahaan waa nin ay aad isu fahmeen raysul wasaaraha kana dhex muuqda saaxiibada gaarka ah ee raysul wasaare Gaas ku leeyahay xukuumadda dhexdeeda waxaana lagu tiriyaa in Jaahweyn iyo afhayeen C/raxmaan Yariisow ay labaduba yihiin garbaha muhimka ah ee ololaha siyaasadeed ee raysul wasaare Gaas ee ku wajahan Agoosto 2012 ka bacdi. Dadka yaqaana wasiir Jaahweyn waxay sheegayaan in intii uu joogay wasaaradda uu aad uga shaqeysiiyey afkaarta raysul wasaaraha taasoo uu ku kasbaday in C/weli Gaas aamino shaqada wasiirka, waana arimaha xitaa sababay in madaxweynuhu kula dagaalo wasiirka.
Dadaalka kooxda Aala Sheekh
Dhanka kale xulufada madaxweyne Shariif (Aala Sheekh) ayaa u arka khilaafkan mid labo waji yeelan kara oo haddii lagu guuleystana kordhin kara guulaha ay kooxdu ka gaareyso xagga siyaasadda haddii kalana ay dhici karto in utun siyaasadeed ay ku noqoto ahdaafta kooxda ee mustaqbalka dhow ka leedahay siyaasadda.
Marka si loo fiiriyo, Kooxda Aala Sheekh waxay dareensan tahay in wasiir Jaahweyn uu aad u yareeyey kaalinta Aala Sheekh ku leeyihiin qalabka warbaahinta ee dawladu maamusho iyo inuu buunbuunin fara badan u sameeyo ninka ay saaxiibka yihiin (Raysul wasaare Gaas), sidaasi darteed dagaalka hadda lagu wado wasiir Jaahweyn wuxuu kooxda ula muuqdaa mid sababi kara in wasaarada warfaafinta oo ka mid ah wasaaradaha ugu muhimsan dawlada ay mari doonto dhinacooda si ay barnaamijkooda siyaasadeed ugu adeegsadaan weliba waqtigan muhimka ee lagu jiro kalaguurka ku eg Agoosto 2012.
Raysal Wasaare Gaas (dhexda) Wasiirka warfaafinta (bidix)
Marka laga yimaado dareenka kooxda Aala Sheekh, madaxweyne Shariif wuxuu tuhmayaa arimo kale oo ay ka mid yihiin khilaafkii isaga iyo wasiirka dhexmaray labo bilood ka hor ee ka dhashay magacaabista agaasimaha tiyaatarka qaranka oo wasiirku wareegto ku soo saaray madaxweynuhuna nin kale u magacaabay, arintaasi oo markii dambe raysul wasaaruhu ku xaliyey in madaxweynaha loo tanaasulo.
Sida ay sheegayaan xubno dawlada ka tirsan oo aad ula socda labada nin, waxaa iyana jirta in wasiir Jaahweyn uu gacanta ku hayo dhaqaale gaaraya $1 milyan (hal milyan oo doolar) oo deeq ahaan dawlada Faransiiska iyo hay’ado ajnabi ah u siiyeen wasaarada warfaafinta iyo dib u hawlgelinta Tiyaatarka qaranka, lacagtaasoo madaxweynuhu amray in wasiirku soo wareejiyo balse uu diiday. Dooda lacagtaasi ku saabsan ayaan raysul wasaaruhu ka warheyn laakiin wuxuu ka warheley markii muranka weynaaday.
Mid ka mid ah ragga ku dhow wasiirka oo Shabakadda ay weydiisay sida arimuhu ku dhamaan karaan ayaa meesha ka saaray in wasiirku isku casili doono si fudud, Waxaana haddi ay sidaasi noqoto laga cabsi qabaa in mudada afarta bilood ee dawlada u harsan ay ku dhamaato isheysadka labada kooxood ee dawlada oo ay dheer tahay khilaafkii baarlamaanka ka dhex jiray taasoo la micne ah sidii ay ku dhamaatay DAWLADII C/laahi Yuusuf iyo Nuur Cadde ee 2008.
Farmaajo oo Sheegay in Xilligii uu Ra’iisulwasaaraha u ahaa DFKMG ay joojiyeen Heshiiska Shirkadda Hallidayfinch Soomaaliya iyo Dagaalladii Sokeeye.